Shirqoolka SNM ee gobolka Sanaag | allsanaag
Shirqoolka SNM ee gobolka Sanaag
Arintan hoos ku qoran mid la mid ah, ayaa SNM hadda doonayaan inay ka bilaabaan Maakhir. Shirqoolkan waxa loogu magac daray ” Siddi gobolka Sanaag looga saari lahaa dhulka lagu muran sanay oo xoog iyo lacag waxay lahaayeen ku qabsan lahaayeen dhamaan gobolka . Iyaga oo lacag u balan qaaday saraakiil iyo isimo.
Taliye sidii qorshuhu ahaa Waxaynu ku jirnaa wejigii 3aad ee Barnaamijkeennii ka aargoosiga Daaroodka Ilaah baa Inoo hiiliyey Wixii aynu hanti aynu u hurnayna waxaa inooga qiimo badan gacan ku haynta Laascaanood oo sidii looga baqayey iyo si u dhawtoona si aan ahayn laynoogu sakhiray.
Haddaba qolodayada bariga liiskii naloo xil saaray ee rag doorka Maxamuud Garaad waa kan annagoo la kaashannay guurti Habar jeclo iyo dad Dhulbahante wax la wadaaga rag iyo dumurba iyo kuwii iyaga ahaa ee midiiddinka inoo ahaaba.
Taliye fulinta hawshan waa in aan sinaba adiga laguugu tuhmin,Xitaa Isaaqeena haw adeegsan kuwa inoo dhagaroobey ee calooshood u shaqeystayaasha ee Dhulbahante culeyska saar adigoo ku dhaarinaya in haddii la ogaado aanu noolanayn hadduu xogta saaro.Ragga aynu isku hubno waxaa ka mid ah Cabdinuur Diiriye Sugule oo ilaa SNMtii inala socday,maxaabiisteeniina soo furdaamiyey.
Ninka Rashiid Ligan la yiraahdo waxaa laga helaa xogta dhabta ah godobo badana inoo galay, Hadaad u baahatid cid deg deg loo khaarajiyo cid aan Cali Baaruud ahayn uma baahnid.
Shirkii u dambeeyey Shuurada Saadada wuxuu Cabdiraxman Ducaale ka sheegay in mushaharkii labanlaab looga dhigay basaasiinteenna Daaroodka ah, Taliye Hablaheena la qabo ee magaalada degan uga qaad Dahabshiil 5 kun oo doolar oo xafiiska tabarucaadda ka dalbo.
Ninka iminka Laaska jooga ee geesinnimo,garaad iyo kartiba laysugu daray oo Naaleye Axmed oo dhan wada ogol yihiin gudo iyo debed oo horayna dhawr jeer halkan nagu gilgiley xilligii Daaroodku baalka ka qoyanaa,Waa wiil yar oo xitaa baarlamaanka Puntland xubin ka noqday, In aad isaga ugu qabtaannu qabnaa si intooda kalana loogu bahdilo magaciisu waa:C/rashiid Maxamed Warsame wuxuuse caan ku yahay �Faroole Dhabayaco� waa inaanu Mandeera ka sokeyn,hadhawna aynu saani isugu dhaafino si farsameysan oo la liqi karo.
Ragga kale ee macnaha lihi badi qax bay ku bexeen laakiin 7 kale oo Jaamac Siyaad iyo Ugaadh yahan ah ayaa iminka jooga waana magacyada gaarka u calaamadsan, Kolay khabiir waa tahayee kala fogfogee oboreyshinnada walow aynaan cidna wax iskaga tirinayn haddana waa in aan beesha caalamku inoo helin marmarsiinyo ay qurbajoogtoodu inagaga gar heli karto.
Taliye liiskani waa 45ka nin ee inoogu khatarta badan mid kastana xogtiisa lifaaqa ka daalaco,Ragga aad isticmaali kartid u sheeg in ay ku soo fool lee yihiin 3 gabdhood iyo wakiiladii waaxdayda ka tirsanaa ilaa Boosaso,Taliye hanaga deg degin.
← Ciidamadda Badda Puntland oo Gaaray Xeebta Garacad Gobolka Sanaag →